Igumbi lokulala elinye elitofotofo iDeer Lake Suite - I-Airbnb
Igumbi lokulala elinye elitofotofo iDeer Lake Suite
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTerry & Mona
Igumbi lokulala elinye elihonjiswe kakuhle, elitofotofo neliqaqambileyo kwigumbi lokulala elinye. Imizuzu emihlanu xa usuka kwisikhululo seenqwelo-moya iDeer Lake, eGros Morne National Park. Umgama wokuya kwiivenkile zokutyela, iivenkile zekofu, indawo yokuzilolonga kunye nemidlalo kunye neevenkile zokuthenga.
Igumbi lethu elinomnyango ophumela ngaphandle linebhedi elala abantu ababini etofotofo, ikhitshi elinento yonke, inyama eyojiweyo kwiveranda ehlotyeni. Ukufikelela lula ukusuka kwindlela ephakamileyo kodwa kusekho indawo ethe cwaka kakhulu.
4.85 · Izimvo eziyi-155
Indlu yethu ikwindawo entle kakhulu eDeer Lake. Ukufikelela lula ukusuka kwindlela ephakamileyo ukuya kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwiivenkile zekofu, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zokuthenga. Kukho iindawo ezintle zokuhamba ngeenyawo nebhayisekile kule nxalenye yedolophu. Sikwakufutshane neendlela zokuhamba ngekhephu neze-ATV.
Umbuki zindwendwe ngu- Terry & Mona
Sidla ngokuthanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo kangangoko zifuna. Sisoloko sisenza umsebenzi waseyadini ngamaxesha athile okanye sicoca indawo yethu yokuhlala. Nangona kunjalo, sithanda ukuncokola neendwendwe zethu ukuze sive ngohambo lwazo size sabelane ngamacebiso okuhamba.
Sidla ngokuthanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo kangangoko zifuna. Sisoloko sisenza umsebenzi waseyadini ngamaxesha athile okanye sicoca indawo yethu yokuhlala. Nangona kunjal…